‘ केही समयमै सामान्य दिनमा फर्कन चाहन्छौ ’ओझा « KhelkudNews.com
Published On : 26 April, 2021 6:26 pm
आशा ओझा नेपाली जुडोकी पहिलो पुस्ताकी महिला जुडो खेलाडी । तीनै आशासँग समसामयिक विषयमा खेलकुद न्युज डटकमले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप तः
आज भोलि के मा व्यस्त रहनु भएको छ ?
अहिले त रोजगार, घर परिवार । यस्तै सामान्य जीवन बिताइरहेको छु ।
तपाईँ त पहिलो पुस्ताको जुडो कर्मी । खेलकुदमा कत्तिको सक्रिय ?
सक्रिय थिए । तर पहिलो पुस्ताको जुडो खेलाडी भए पछि स्वभाबिक यसमा चासो रहने भयो । तर, गत एक वर्ष देखि संसारमा फैलिएको महामारीका कारण हामी नेपाली र जुडो परिवार पनि आहत छौ । खेल गतिविधि प्रभावित भएको छ । यस कारण त्यत्ति धेरै गतिविधि भएको छैन । मेरो सक्रियता पनि कम छ ।
विगत र अहिलेको जुडोको अवस्था के छ ?
हामी खेल्दा भन्दा अहिलेको अवस्था फरक छ । हामी खेल्दा श्रोत र साधनको कमी थियो । अहिले यो बढेको छ । यत्ति मात्र होइन, हाम्रो समाजमा खेलकुदलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक भइसकेको छ । यस कारण अहिले महिलाका लागि त अझ सहज भएको छ जस्तो लाग्छ ।
नेपाल जुडो सङ्घको गतिविधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ । जुडो सङ्घ सक्रिय सङ्घको रूपमा रहेको छ । यस कारण पछिल्ला केही वर्ष यता जुडो खेलले नतिजा पनि राम्रो दिएको छ । यसै नतिजाको आधारमा नै सङ्घ कत्ति सक्रिय छ भन्ने प्रस्ट भएको छ । मद्रासमा दक्षिण एसियाली खेलकुद पछि १३ औ दक्षिण एसियाली खेलकुद नेपाली जुडोका लागि स्वर्णिम बनेको छ ।
फेरी जुडो रेफ्रिको रूपमा सक्रिय हुने विचार छ की छैन होला ?
किन नहुने छ नि । अहिले कोभिडका कारण पो सबै क्षेत्र निष्क्रिय भएको छ । यो निष्क्रियता पछि केही समय पछि नै जुडो खेलको सक्रियता बढ्ने छ । म पनि फेरी रेफ्रिको रूपमा सक्रिय रहने नै छु ।
जुडो खेलाडीलाई यहाँले भन्नु केही छ की ?
सबै भाइ बहिनीहरूले राम्रो गरिरहनु भएको छ । अझ राम्रो गर्नु होला भनी शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु । मेहनत गर्दै जाँदा यहाँहरूको भविष्य उज्ज्वल देख्छु ।
आम नेपालीलाई यहाँको तर्फबाट केही भन्नु छ की ?
यो महामारीको समयमा हामी छौ । सबै जना सुरक्षित रहौँ अनि सावधान रहौँ । ज्यान जोगिए त धेरै कुरा ठिक हुँदै गई हाल्छ नि ।
भारतमा भएको १२ औ दक्षिण एसियाली खेलकुदकी स्वर्ण पदक विजेता फुपू ल्हमु खत्री विवाह बन्धनमा